Inona ny tambajotra fanaterana atiny (CDN)? | Martech Zone
Na dia mitohy mihena aza ny vidiny amin'ny fampiantranoana sy ny bandwidth, dia mety ho lafo be ny fampiantranoana tranonkala amin'ny sehatra fampiantranoana premium. Ary raha tsy mandoa be ianao, dia azo inoana fa miadana ny tranokalanao - very ny orinasanao manan-danja.
Rehefa mieritreritra ireo mpizara anao hampiantrano ny tranokalanao ianao dia tsy maintsy miaritra fangatahana maro. Ny sasany amin'ireo fangatahana ireo dia mety mitaky ny mpizarao hifandray amin'ireo mpizara data hafa na interface interface program (API) an'ny antoko fahatelo alohan'ny hamoronana pejy mavitrika.
Apetaho amin'ireo mpampiasa ary mety halevina vetivety amin'ny fangatahana ity mpizara ity. Ny tsirairay amin'ireo fangatahana ireo dia mitaky fotoana. Ny foto-kevitra dia fototr'izany - na ny mpampiasa miandry pejy iray ho entina na botan'ny motera fikarohana tonga hanafoana ny atiny. Ireo tranga roa ireo dia mety handratra ny asanao raha miadana ny tranokalanao. Tombontsoa ho anao ny mitazona ny pejinao ho maivana sy haingana - ny fampitomboana ny mpampiasa amin'ny tranokala snappy dia afaka mampitombo ny varotra. Ny fanomezana an'i Google tranokala mahasosotra dia mety hahazo bebe kokoa amin'ireo pejinao voatanisa sy hita.
Na dia miaina anaty tontolo mahavariana miaraka amina fotodrafitrasa amin'ny Internet miorina amin'ny fibre izay sady tsy misy dikany aza isika dia haingana dia haingana, ny jeografia dia mbola mitana andraikitra lehibe amin'ny habetsaky ny fotoana ilaina eo anelanelan'ny fangatahana amin'ny mpizaha, amin'ny alàlan'ny router, mankany amin'ny mpampiantrano…. miverina.
Raha tsorina, ny lavitra ny serveranao dia avy amin'ny mpanjifanao, ny halaviran'ny tranokalanao dia ho azy ireo. Ny valiny dia ny fampiasana a fifandraisana an-tariby.
Na dia mameno ny pejinao aza ny mpizara anao ary mifehy ny atiny mavitrika rehetra sy API ny fangatahana, ny tamba-jotra fandefasana atiny (CDN) dia afaka mamaky singa amin'ny tambajotra aparitaka amin'ny foibe angona manerana an'izao tontolo izao. Midika izany fa ny vinavinanao any India na any Royaume-Uni dia afaka mijery ny tranokalanao tahaka ny hafainganam-pandehan'ny mpitsidika eny an-dalambe.
Akamai no mpisava lalana ao amin'ny CDN Technology
Ny saran'ny CDN dia mety miainga amin'ny malalaka ka hatrany amin'ny fandrarana miankina amin'ny fotodrafitrasa, ny fifanarahana ambaratonga (SLA), ny fahitsiana, ny famerenam-bidy, ary - mazava ho azy - ny hafainganan'ny. Ireto misy mpilalao sasany eny an-tsena:
Cloudflare mety ho iray amin'ireo CDN malaza indrindra any.
Raha mandeha ianao WordPress, Jetpack manolotra CDN azy manokana izay matanjaka be. Manome ny tranonkalantsika izahay Flywheel izay misy CDN miaraka amin'ny serivisy.
StackPath CDN dia safidy tsotra ho an'ny orinasa kely afaka manome fampisehoana lehibe.
Amazon CloudFront mety ho CDN lehibe indrindra miaraka amin'ny Amazon Simple Storage Service (S3) ho mpamatsy CDN mora vidy indrindra amin'izao fotoana izao. Ampiasainay izy io ary zara raha ambony $ 2 isam-bolana ny vidinay!
Limelight Networks or Akamai Ny tambajotra dia malaza eo amin'ny sehatry ny orinasa.
Sary avy amin'ny Tambajotra Akamai
Ny famoahana atiny dia tsy voatery hoferana amin'ny sary mijanona ihany koa. Na ny tranokala mavitrika aza dia azo aseho amin'ny alàlan'ny CDN. Ny tombony azo avy amin'ny CDN dia betsaka. Ankoatry ny fanatsarana ny fahabangan'ny tranokalanao, ny CDNs dia afaka manome fanamaivanana ny enta-mavesatry ny mpizara ankehitriny sy ny refitabilitanao mihoatra ny fetran'ny fakan-dry zareo.
Ny CDN avo lenta amin'ny orinasa dia matetika no miverimberina ary manana fotoana ambony ihany koa. Ary amin'ny alàlan'ny famoahana ny fifamoivoizana mankany amin'ny CDN, mety ho hitanao aza fa mihena ny vidin'ny fampiantranoana sy ny bandwidth miaraka amin'ny fitomboan'ny vola miditra. Tsy fampiasam-bola ratsy! Ankoatra ny famatrarana sary, ny fananana tamba-jotra fandefasana atiny dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hanompoanao haingana kokoa ny tranokalanao!
Fambara: mpanjifa sy mpiara-miasa amin'i StackPath CDN ary tia ny serivisy!
Tags: akamaiTambajotra Akamairahona rahona amazoncdnrahonafifandraisana an-taribyny fomba fanaovana haingana ny tranokalanaojetpack cdnmiraharahatambajotra limelightmaxcdnmampihena ny fotoana entanamanafaingana ny tranokalainona nyinona ny cdninona ny tambajotra fandefasana atinyWordPress
Ny fomba manimba ny orinasanao ny tranokalanao miadana
May 8, 2012 ao amin'ny 7: 13 PM
Ho an'ny famerana fanampiny ao amin'ny CDN mba hiantohana ny fotoana maharitra dia azonao atao ny mampiasa paikady Dual-CDN. Amin'ny ankapobeny dia afaka manana fifandanjana entana eo anelanelan'ny CDN roa ianao amin'ny fotoana iray. Afaka mahita fampahalalana bebe kokoa momba izany ianao amin'ny alàlan'ny fanamarinana ity tranokala ity.